विश्वप्रकाशलाई प्रश्न- तपाईं महाधिवेशनमा कुन पदमा उठ्ने हो? :: Setopati
विश्वप्रकाशलाई प्रश्न- तपाईं महाधिवेशनमा कुन पदमा उठ्ने हो? ‘विभाग गठन ढिला भएको हो तर विधानविपरीत होइन’
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, असोज २
विश्वप्रकाश शर्मा। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
फागुनमा हुने नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन र प्रतिपक्षीको भूमिकाका सन्दर्भमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग सेतोपाटीका प्रशन्न पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन फागुनमा हुने भनिएको छ। तयारी कस्तो छ?
पार्टीको महाधिवेशन फागुन ७-१० गते गर्ने कार्ययोजनाबमोजिम स्थानीय तहको समायोजन अधिकांश जिल्लाको सकेर क्रियाशील सदस्यता वितरणको चरणमा छौं।
करिब ६५ जिल्लाले क्रियाशील वितरण गरिरहेका छन्। क्रियाशीलको काम सकिएपछि टोल समिति र वडा अधिवेशन गर्न मतदाता तयार हुन्छन्।
कोरोनाले गर्दा पनि महाधिवेशन तयारीलाई प्रभावित बनाएको छ। जहाँ निषेधाज्ञा छैन त्यहाँ क्रियाशीलको काम रोकिएको छैन।
अहिलेको तयारी हेर्दा फागुनमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ त?
महधिवेशन गर्न सकिने अवस्था छ भनौं कोरोनाको प्रतिकूलता हामीले जानिरहेकै छौं। फागुनमा नहुने नै भयो भनौं विधिवत् रूपमा निर्णय गरिसकेको या गर्ने टुंगोमा पुगेको छैन।
कोरोना हुँदैनथ्यो भने बाँकी रहेको पाँच महिना महाधिवेशन तयारी गर्न सकिन्थ्यो। अब असोजको मध्यसम्म केन्द्रीय समिति बैठक बसेर समग्र वस्तुस्थितिको मूल्यांकन गर्नेछौं।
त्यसपछाडि समय अपुग हुन्छ कि भन्नेमा केन्द्रीय समिति पुग्यो भनेमात्रै फागुनको मितिबारे केही धारणा बन्छ। अन्यथा अहिले हाम्रो सोचाइ फागुनको मितिलाई कायम राख्ने तर कार्यतालिका ‘मिट’ गर्न केही हेरफेर गर्नु पर्ने विषय हो त्यसमा जाने भन्ने खालको सम्भावना छ।
फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकिए कहिले हुन्छ?
विधानअनुसार केन्द्रीय समितिले फागुनसम्म म्याद थपेको हो। त्यसपछि म्याद थप गर्न नेपालको संविधानले अरू छ महिना समय दिन्छ। फागुनमा नभए केही महिनापछि हुने गरी केन्द्रीय समितिले नै मिति निर्दृष्ट गर्छ।
महामारीका बेला कसरी महाधिवेशन गर्ने भन्ने पनि बहस भइरहेका छन्। प्रविधि प्रयोग गर्ने कि विकेन्द्रीकरण गर्ने भन्ने रहेछ नि?
निश्चय नै। केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रविधि वा विकेन्द्रीकरणबाट अधिवेशन गर्ने खालको नीति पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले पनि आफूलाई परिमार्जित गर्ने, विकसित गर्ने कुरामा जानुपर्‍यो।
त्यसपछि प्राविधिक पाटो जुन छ त्यो भनेको कांग्रेसको www.nepalicongress.org २१ वर्षपछि परिमार्जित स्वरूपमा आएको छ।
प्रविधिमार्फत् कसरी महाधिवेशनका काम गर्न सकिएला भनेर हामी अध्ययनमै छौं। विकेन्द्रीत वा प्रविधिबाट के कसरी महाधिवेशन गर्ने भनेर घनिभूत ढंगले छलफल हुन जरूरी छ।
यसका लागि त पदाधिकारी वा केन्द्रीय समिति बैठक गर्नुपर्ला, कहिले हुन्छ?
महामन्त्री शशांक कोइराला अस्पताल जानु पर्ने अवस्था नभएको भए असोजको ६-७ गतेतिर बैठक बस्ने तयारीमा थियौं।
कोरोना संक्रमणपछि महामन्त्री अस्पताल हुनुहुन्छ। सभापतिज्यूको सचिवालयका सदस्यलाई पनि संक्रमण पुष्टि भएकाले उहाँ पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा हुनुहुन्छ। होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ।
केन्द्रीय सदस्यहरूको कोरोना परीक्षण गरेर भए पनि बैठक बस्छ। सभापति र वरिष्ठ नेतालगायत नेताबीचको सम्वादपछि खाका बनाएर केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्छौं। सोही खाकामा केन्द्रीय समितिले थपघट गर्नेछ। असोज अन्तिमसम्म केन्द्रीय समिति बैठक बस्छ।
केन्द्रीय समितिको मुख्य एजेन्डा महाधिवेशन मिति हेरफेर गर्ने नै होला। मिति सार्न सभापतिकै कार्यकाल थप गर्नुपर्छ, के आधारमा थप्ने?
हामीले नियमित रूपमा काम गर्न सकेको भए यतिबेला महाधिवेशन गरिसक्नुपर्थ्यो। गएको निर्वाचनमा पराजयपछि लामो समय पराजयमै अलमलियौं। विधान संशोधन गर्न पनि करिब एक वर्ष ढिला भयो।
संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई दिएको समयअनुसार छ महिना अब समय थप गर्न सकिन्छ। सकेसम्म फागुनमै महाधिवेशन गरौं भन्ने हो। तर सकिएन भने जेठसम्म भए पनि गर्नुपर्छ। भदौमा महाधिवेशन भएन भने के गर्ने भन्नेमा अहिले नै परिकल्पना नगरौं।
महाधिवेशनले नीति र नेतृत्व टुंग्याउँछ। कांग्रेसमा युवालाई पालो दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेका छन्। तपाईंको के तयारी छ?
सिंगै कांग्रेसलाई तरूणमय बनाउन जरूरी छ। युवाले कांग्रेसको नेतृत्व सम्हाल्ने ढंगले तलैबाट प्रतिनिधि आउने सम्भावना छ। किनभने क्रियाशील सदस्यता शतप्रतिशत बढाउने भनेपछि युवाहरूको ठूलो संख्या क्षेत्रीय प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म आउँछ।
अर्कोतर्फ निश्चय नै म महाधिवेशनमा उम्मेद्वार हो। म मैदानमा छु। तर अहिले कुन पदमा उठ्छु भन्ने बेला भइसकेको छैन।
नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य र समृद्धि सुनिश्चितताको बाटोमा कांग्रेस महाधिवेशनले दिशा प्रवाह गर्नुपर्छ। मेरो ध्यान अहिले त्यही कुरामा केन्द्रीत छ।
समसामयिक घटनाक्रमलाई एकैछिन बिर्सेर महाधिवेशनका आँखाले मात्रै हेर्दा कुन पदमा उठ्ने तयारी आफ्नो टिममा गर्नुभएको छ?
नेविसंघदेखि पार्टी प्रवक्तासम्म मैले खेलेको भूमिकाका आधारमा देशैभरिका साथीहरूले म के पदमा उपयुक्त छु भन्ने मूल्यांकन गर्नुहुन्छ।
तपाईं के भूमिकामा आउनुहुन्छ भन्ने कुरा कार्यकर्ताले निर्णय गर्ने हुन् कि अहिले भएकै नेतृत्व कसैको फेरो समातेर हो?
उम्मेद्वारी दर्ता मैले नै गर्ने हो। तर उम्मेद्वारीमा देशभरका साथीहरूको भावना स्वभाविक रूपमा गाँस्नै पर्छ।
कार्यकर्ताले जे भन्छन् त्यही मान्छु भन्न खोज्नुभएको?
महाधिवेशनको मैदानमा म हुनेछ। अरू साथीहरूले उम्मेदवारी घोषणा गरे भनेर मैले अहिले नै घोषणा गर्नु प्रवक्ताको कोणबाट मर्यादित हुँदैन।
पार्टीभित्रका आन्तरिक विवादबारे पनि कुरा गरौं। सभापतिले विभाग गठन गरेपछि विवाद छ। कांग्रेसमा जहिले पनि समयमा किन विभाग गठन गरिँदैन?
विभाग गठन हुँदा अधिकतम् सहमति जुटाउनु पर्ने हो। हामीले त्यसमा सहमति निर्माण गर्न नसकेकै हो।
सहमति नहुँदा विभाग गठन ढिला हुनुमा आलोचना स्वभाविक छ, तर यो विधानविपरीत होइन। सहमति सभापतिले निर्माण गर्न सक्नुभएन या वरिष्ठ नेता सहमतिमा आइपुग्न सक्नुभएन, जे भए पनि नेतृत्वका हिसावले सभापतिले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। छ महिना नाघेपछि सभापतिले विभाग गठन गर्न पाउनुहुन्न भनेर कसैले भन्यो भने त्यो गलत हुन्छ।
महाधिवेशनका मुखमा पद बाँडेर प्रभावित बनाउन खोजियो यसले निष्पक्षताको प्रश्न उठ्छ भन्ने छ नि!
निर्वाचन गराउने कर्तव्य केन्द्रीय निर्वाचन समितिको हो। महाधिवशेन घोषणा भइसकेपछि कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न पाइने छैन भनेर विधानमा लेखिएको छैन। त्यसैले महाधिवेशनतर्फ अगाडि बढ्दा झन् संरचनाहरू बनाउने हो।
यस्तै विरोध सुशील कोइराला सभापति हुँदा पनि भयो देउवाले त राजीनामा नै दिन्छु भन्नुभएको हो। तपाईंहरू पनि यस्ता विवादलाई किन समर्थन गरिरहनुहुन्छ?
मेरो बुझाइमा त्यसबेला वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले राखेको असहमति पनि गलत थियो र अहिले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राखेको असहमति पनि गलत छ। गलतलाई निरन्तरता दिने काम नेताहरूले नगर्नु पर्ने हो।
तर सुशील कोइराला सभापति हुँदाको विवाद अहिलेभन्दा अलिकति फरक छ। त्यसबेला उहाँले विभाग संयोजकसहित सदस्यहरू एकैपटक गठन गर्नुभएको थियो। तर अहिले विभाग संयोजक गठन गरेको केही अन्तरालपछि मात्रै पूर्णता दिइएको छ।
विषय बदलौं, अहिले कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा निकै कमजोर भयो भन्ने आलोचना छ। तपाईंहरूको भूमिका किन यति कमजोर?
हामीले प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावारी बनाउन एकीकृत प्राथमिकता तय गरेर जान सकिएन। महाधिवेशनमा अब को भन्ने मात्रै केन्द्रीत भयो। यसमा हामी चुकेका हौं।
प्रतिपक्षको अहिले भूमिकामा म आफैं पनि सन्तुष्ट छैन, परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ।
वाइडबडीदेखि पछिल्लो समय कोरोनाका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटला भइरहेका कुरा मिडियामा आइरहेका छन् तर प्रतिपक्षको दह्रो आवाज छैन। भागबन्डाले सभापतिकै मुख बन्द छ भन्ने आरोप छ नि?
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारका कुरा उठाउँदा सरकार धम्क्याउँछ भनेर सभापतिले केही दिनअगाडि बोल्नुभएको छ।
यसबारे हामीले निरन्तर बोलेका छौं। पद लिनका लागि बोलेन भन्ने होइन। हामीले बोलेको अझै प्रखर भएन कि भन्ने मान्न तयार छु। केही पद देलान् भनेर हाम्रो मुख बन्द भयो भन्नु गलत हो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २, २०७७, ०८:१६:००
चाडपर्वको बेलामा उपभोग्य सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन निर्देशन
कंग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरे कन्हैया कुमार